Man United & Liverpool Oo Dhibacaha Ku Qaybsaday Old Trafford Kulan Ay Dhaawacyo Hadheeyeen & Natiijo U Fiican Man City, Chelsea Iyo Arsenal Oo Soo Baxday. - Cadalool.com
Man United & Liverpool Oo Dhibacaha Ku Qaybsaday Old Trafford Kulan Ay Dhaawacyo Hadheeyeen & Natiijo U Fiican Man City, Chelsea Iyo Arsenal Oo Soo Baxday.
Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa ku qaybsaday dhibcaha gegida Old Trafford kulankii ku dhex maray galabta waxaana halkaas kasoo baxday natiijo u fiican kooxaha Man City, Chelsea iyo Arsenal oo dhamaantood faa’ido helaya.
City ayaa haatan hal dhibic oo kaliya ka dambaysa Reds oo ay min 27 kulan ciyaareen halka Chelsea iyo Arsenal ay faa’ido ka heleen Man United oo booska afraad kaga jirtay.
Man United: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Herrera, McTominay, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford
Keyd: Romero, Bailly, Sanchez, Lingard, Pereira, Fred, Dalot
Liverpool Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino
Keyd: Mignolet, Keita, Sturridge, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold
Daafaca Man United ee Ashley Young ayaa halis galiyay kooxdiisa daqiiqadihii ugu horreeyay kaddib markii uu baaska ka gaabiyay goolhaye De Gea kaas oo si adag kubadda kaga celiyay xiddigaha Liverpool.
Kaddib celinta uu kubadda celinayay, De Gea ayaa gacanta ku taabtay kubadda oo ahayd baas toos ah oo uga yimid Young waxaana xerada dhexdeeda la dhigay laad xor ah balse Milner ayaa dhaafin waayay ciyaartoyda kubadda uu laagay.
Manchester United ayay halis dhaawacyo ahi lasoo daristay waxaana kulanka ka baxay Ander Herrera oo lagu bedelay Andreas Perreira halka Juan Mata lagu bedelay Jesse Lingard.
Liverpool ayaa markeeda la kulantay dhibaato dhaawac waxaana daqiiqadii 30-aad ee kulanka dhaawac ku baxay Roberto Firmino waxaana bedelkiisa yimid Daniel Sturiddge.
Fursadaha ayaa ilaa haatan ah kuwo kulanka ku yar, Liverpool ayaa ah kooxda inta badan kubadda haysata halka xiddigaha Man United ay u muuqdaan kuwo aad u feejigan,
Manchester United ayaa samaysay fursadii ugu halista badnayd ilaa haatan, Pogba ayaa kubad weerar deg deg ah soo abaabulay isaga oo kubadda u dhiibay Lukaku kaas oo isna kubadda ka dhex saaray daafacyada Liverpool, Lingard ayaa isku dayay inuu u gaso goolhaye Alisson balse goolhayaha ree Brazil ayaa ka diiday.
Matip ayaa dhinaciisa isku dayay inuu kubad madax ah ku daah furo bandhiga goolasha kulankan balse kubadda uu madaxeeyay oo gees ka laad ahayd ayaa dul martay goolka.
Qaybta hore ee kulanka ayaa kusoo dhammaatay bar-bardhac goolal la’aan ah, Qaybtan ayaa ahayd mid ay dhaawacyadu ka bateen fursadaha la kala helay.
Pogba ayaa ku dhawaaday inuu daqiiqadihii ugu horreeyay ee qaybta dambe hoggaanka u dhiibo Red Devils balse kubad geeska laga soo laagay oo uu madax ku darbeeyay ayuu si sahlan ku qabsaday Alisson.
Markale Rashford ayaa kubadda ku helay meel ku dhaw goolka Liverpool isaga oo caawimo ka helay Pogba oo kubad sarre kaga guuleystay Milner balse da’yarkan oo dhaawac ku ciyaaraya kulanka ayaa kubada uu laagay ay dhinac martay goolka.
Matip oo halis ku ahaa kubaddaha dhaadheer ayaa markale ku sigtay inuu gool madax ah ka dhaliyo shabaqa De Gea balse markale ayuusan nasiib u yeelan inuu goolka gaadho darbadiisa ayana wax yar u martay birta goolka.
GOOOAL— MAYA–MAYA: Manchester United ayaa u muuqatay mid hoggaanka kulanka la wareegtay kaddib markii uu Matip si qaldan iskaga dhaliyay kubad uu goolka soo hordhigay Smalling balse calanwadaha kulanka ayaa garab dhaaf tilmaamay.
Smalling ayaa dhammaadkii kulanka ku sigtay inuu dhammaystiro kubad halis ah oo uu geeska kasoo qaaday Lukaku balse daafaca ree England ayaan lugta la gaadhin fursadaas.